Indebe yesosi
Uhlobo: Iibhokisi zokuGcina kunye nemigqomo
Ubuchwephesha: Isitofu sokubumba
Igama lemveliso: Uhlobo olwahluliweyo lwe-Sauce Cup, uhlobo lwe-Hinged Sauce Cup
Ubume: ngeenxa zonke
Umthamo: 2oz&4oz yodidi olwahluliweyo lwesosi indebe, 1oz 2oz 3oz &4oz yohlobo oluHinged sauce Cup
Izinto eziphathekayo Iplastiki
Uhlobo lwePlastiki PP
Uphawu: Ukugcinwa okuzinzileyo, okugciniweyo, okutsha
Indawo yemvelaphi: Tianjin China
Igama lebrand: Yuanzheghe okanye uphawu lwakho
Ukunyamezela imilinganiselo: <±1mm
Ukunyamezela ubunzima: <±5%
MOQ: Iibhokisi ezingama-50
Amava: Iminyaka eyi-8 yamava omenzi kuzo zonke iintlobo zeetafile ezilahlayo
Ukusetyenziswa: Indawo yokutyela, Ukutya okukhawulezayo kunye neeNkonzo zokutya okuThathayo, iiVenkile zokutya & neziselo, Ukwenziwa kokutya & neziselo
Inkonzo: I-OEM, iisampulu zasimahla ezinikezelwayo, nceda uthumele imibuzo ukuze ufumane iinkcukacha
Ikomityi yesosi linyathelo lokuqala ukonwabela okumnandi.Ikomityi yesosi yeplastiki eyenziwe ngezinto zePP inokumelana nempembelelo elungileyo.Sineentlobo ezimbini zesosi yekomityi: Uhlobo oludityanisiweyo oludityanisiweyo kunye nohlobo lwe-Lid olwahlulwe.zombini iintlobo zekomityi yesosi inomsebenzi omhle kakhulu wokutywina kwaye kulula ukuyiphatha.Ikomityi yesosi ifanelekile kuluntu ngokubanzi, kwaye umgangatho othembekileyo wenza ikomityi yesosi idume ngakumbi phakathi kwabathengi.Iyanelisa zonke iimeko zesicelo kwindibano ye-sauce kunye nokuthwala, okuzisa uncedo olukhulu kubomi bethu.
Ngenxa yokuthembeka kwezothutho, ezi ityhubhu zikwasenza esona sisombululo sibalaseleyo sogcino lokutya ngenxa yokomelela kunye nokomelela kwazo.Kulula ukucoca, zinokuphinda zisetyenziswe ukuqinisekisa ukuba ufumana ukusetyenziswa okuphezulu kuzo - ixabiso elikhethekileyo lemali liqinisekisiwe.
Ukutya kwiBanga le-PP Material
Umgangatho wokutya wePP wezinto eziphathekayo, ukutya okukhethiweyo kwePP yezinto eziluhlaza, izinto ezihlala zihlala zicocekile, zihambelana nokusingqongileyo, azinabutyhefu, ezingenancasa, kunye nokuchasana nobushushu.
Ukutywinwa okuhle & noYilo oluQinisekayo
Hayieiyavuza, akukho ncindi ivuzayo xa ishukunyiswa phezulu nasezantsi, Ubungqingqwa obugqibeleleyo kunye nokuqina
Ukumelana noxinzelelo - akukho lula ukwaphuka.
Imveliso yembonakalo yeClassical
Nge2zakudalaIzitayile, uhlobo olwahluliweyo kunye nohlobo oluhinjisiweyo, ukuxhathisa okuqinileyo kuxinzelelo kunye nomthwalo, ukuqina, kunye nomphetho uphuculwe ngononophelo, kunye nenkangeleko egudileyo.
Ngaphambili: Iikomityi zePP / iikomityi zeti yobisi